जलाउनै लाग्दा कोरोना पोजेटिभ आएको खबर घाटमा पुग्यो ४ सय जति मलामी भागाभाग – Khabar PatrikaNp
जलाउनै लाग्दा कोरोना पोजेटिभ आएको खबर घाटमा पुग्यो ४ सय जति मलामी भागाभाग
August 25, 2020 190
बुटवल : कोरोना महामारीपछि सरकारले २५ जनाभन्दा धेरै भेला नहुन निर्देशन जारी गरेको छ। कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै जाँदा मुलुकभर लकडाउनसमेत भइरहेको छ। तर, रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकामा भने कोरोना संक्रमितकै दाहसंस्कारमा झन्डै ४ सय मलामी सामेल भएका छन्।
स्वास्थ्य संवेदनशीलतामाथि खेलवाड र निर्देशन अवज्ञा गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत मलाम पुगे। रूपन्देहीको रोहिणी–३, धकधई निवासी नेपाल युवा किसान पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सञ्जयकुमार मि श्रको दाहसंस्कारमा ठूलै भीड उर्लियो।
मधुमेह र उच्च रक्तचापको समस्या भई केही दिनदेखि बिरामी परेका उनलाई शनिबार उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा भारतको नौतनहामा मृत्यु भयो। मृत्युपछि उनमा कोरोना छ छैन भन्ने आशंका गर्दै बुटवलको निजी प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको थियो।
स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदै परिवार र आफन्तहरूले शवको अन्तिम संस्कार सुरु गरे। आइतबार बिहान ११ बजेतिर शव घरबाट घाटतर्फ लगियो। परिवार, आफन्तसहित झन्डै ४ सय जति मलामी शवको पछि लागे। जलाउनै लाग्दा उनमा कोरोना पोजेटिभ आएको खबर रोहिणी घाटमै पुग्यो। मलामी भागाभाग गरे।
मलामी पुगेका रोहिणी गाउँपालिका— ३ का अध्यक्ष वीरबहादुर क्षेत्रीले शव जल्न थालेपछि मात्रै कोरोना पोजेटिभको खबर आएको दाबी गरे। ‘हामीले धेरै भीडभाड नगर्नुस्, मलामी धेरै जानु हँुदैन भनेकै थियौं। तर मान्छेहरू आउने जाने गरिरहेका थिए,’ उनले भने।
प्रयोगशालाले आइतबार मध्याह्न कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट दिएको थियो। स्वाब परीक्षण गरेकाले सरकारी निकायले त्यसको प्रतीक्षा गरेको थियो। कोरोना पुष्टि भएपछि स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले उनको शव सुरक्षितसाथ व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइरहेको थियो। तर परिवार र आफन्तले आइतबार मध्याह्न उनको शव रोहिणी घाटमा दाहसंस्कारका लागि पु¥याए।
स्वास्थ्य कार्यालय, रूपन्देहीका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक केदारनाथ शाहले उनमा कोरोना पुष्टि भएपछि नजलाउन आग्रह गरिएको बताए। ‘हामीले शव नजलाउनुस् भनिरहेका थियौं,’ उनले भने। कोरोना संक्रमितको शव सुरक्षा मापदण्डसहित गाड्ने गरिएको छ। उनको शव भने जलाइएको छ। त्यसबाट संक्रमण गाउँभरि फैलने त्रास बढेको छ।
रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष सनोजकुमार यादवका अनुसार चितामा राखेर जलाउनै लागेका बेला कोरोना पोजेटिभको नतिजा आएको थियो। ‘लास चितामा राखेका बेला उनमा कोरोना छ भन्ने खबर आएको थियो। नजिक भएकाहरू टाढाटाढा भागे। आफन्तले आगो लगाए,’ उनले भने।
मृतकको घर धक्धई बजारमै छ। उनको शव रातभर घरमै राखिएको थियो। समवेदना दिन कैयौं मानिसको जमघट भएको थियो। पालिकाले कोरोना पोजेटिभ आएपछि त्यो क्षेत्रमा सिल गरेको छ। ‘डिसइन्फेक्सन’ समेत गरिएको वडाध्यक्ष क्षेत्रीले जानकारी दिए।
साउनको अन्तिम साता बुटवलमा पनि करिब १ सय ५० जना मलामी गएका थिए। कालिकानगरकी एक महिलाको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। तर कोरोना परीक्षण गरिएन। तिनै महिलाका आफन्तमा कोरोना देखिएको थियो। अहिले मलामी गएका, आफन्त, नाताकुटुम्ब, पण्डितहरूसमेत गरी ४० जनाभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
Prevलेबनानमा राती मानिस सुत्दैनन् अचानक रुन्छन् कसरी सहयोग गर्ने ? : मनोचिकित्सक
Nextफिल्म अभिनेत्री तथा मोडल रेखा लिम्बूले भनिन : चरित्रहत्या गर्न खोजियो
आज भोली च’र्चा को शिखरमा पुगेकी गायिका टिका सानुको आँखामा आँशु, रविलाई हात जोड्दै यसो भनिन्
२ हप्तामै तौल घटाउहोस यसरि उसिनेको अण्डा खानुहोस् (डाइट प्लानसहित)
कोरोना भाइरस कोभिड-१९ बाट पछिल्लो २४ घण्टामा ६ जनाको मृत्यु, नेपालमा मृतकको संख्या ३०६
पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप ७ सय ३६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण १३ जनाले गुमाए ज्यान
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (34188)
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (34060)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (33506)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (29113)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (27484)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (25283)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (22648)
एका बिहानै बिसाल नाग देवताको दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ (21253)
नन्दा सिंह को आखा बाट अन्धकार हट्यो पहिलो चोटि संसार देख्दा खुसिले रोईन (भिडियो हेर्नुहोस) (20253)
होसियार ! क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोग निम्त्याउँछ यी ५ खानाको बढी सेवन गर्नाले (19599)
झापामा गुडिरहेको बस रोक्दै तो,ड,फो,ड, यात्रुसहित ज,लाउने प्रयास…!
प्रचण्ड र पूर्वगृहमन्त्रीको सुरक्षा कटौती
पूर्व माओवादी कमाण्डरहरुले दिए ओलीलाई साथ, जनमुक्ति सेना पनि ओलीकै पक्षमा, निराश भएको प्रचण्ड यसो भन्छन्
आमा मलाई छिटो लैजानु न गार्हो भैसक्यो भन्दै त्रिभुवन बिमानस्थलबाट हात हल्लाउंदै गएको छोराको उतै मृ’त्यु (भिडियो हेर्नुहोस)